Ngwa - Shanghai May Skin Information Technology Co, Ltd.
Igwe nyocha ntutu isi
Mfefe mmanụ na-esi na sebaceous glands na akpụkpọ ahụ na-emepụta sebum. Ndị nwere ọnọdụ a na-enwekarị akpụkpọ ahụ na-egbuke egbuke na nnukwu pores.
Onyonyo UV Light ewepụtara na nsonaazụ onyonyo achọpụtara:
Wrinkles bụ creases, folds, ma ọ bụ ridges na akpụkpọ. Site na ikpughe na ụzarị ultraviolet, ngbanwe nke akpụkpọ ahụ na-ada ogbenye ma ọ bụ elastin na collagen mebiri emebi, nke na-eme ka akpụkpọ ahụ kpọọ nkụ ma na-eduga n'ịbawanye nke wrinkle. (Hyaluronan nwere ike ọdịdị na-amịkọrọ mmiri na ọ mpịakọta ruo ọtụtụ ugboro ma ọ bụrụ na mmiri na-edebe. N'aka nke ọzọ, Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmiri na-efunahụ, ya nnukwu mbelata na ruru nke square mgbọrọgwụ, cube mgbọrọgwụ, na mgbe ahụ wrinkle bụ. kere eke na akpụkpọ).
Onyonyo ule ewepụtara na nsonaazụ onyonyo achọpụtara:
Green bụ wrinkles kpụrụ, Yellow bụ wrinkles na-etolite ozugbo
Akpụkpọ ahụ nwere ike ịdị na-agba ọchịchịrị mgbe a na-emepụta pigmenti melanin nke ukwuu ma ọ bụ na-adịkwa ọkụ ma ọ bụrụ na ọ dị obere. A na-akpọ nke a "pigmentation" na-akpata site na ụzarị ultraviolet, ọrịa akpụkpọ anụ ma ọ bụ scars.
Ebe miri emi
Ngbanwe ahụ na na n'okpuru elu akpụkpọ ahụ.
Mgbe ntutu, mmanụ na ihe nzuzo kpuchiri orifices ndị a, sebum na-agbakọta n'azụ ha, na-eme ka ntụpọ pụta.
Site na ntachu ruo na mmeghachi ahụ nfụkasị ahụ, enwere ọtụtụ ọnọdụ nke akpụkpọ ahụ gị nwere ike ịcha uhie uhie ma ọ bụ iwe. O nwere ike ịbụ n'ihi na ọbara agbakwunyere na-agbaga n'elu akpụkpọ ahụ iji lụso mgbakasị ahụ ọgụ ma kwalite ọgwụgwọ. Akpụkpọ ahụ na-acha ọbara ọbara nwekwara ike ịpụta site na mgbatị ahụ, dị ka mgbe mgbatị ahụ na-agbawa obi.
Ebe na-acha uhie uhie bụ ihe mgbaàmà na-emetụ n'ahụ
Oghere ahụ bụ obere oghere na oyi akwa akpụkpọ ahụ ebe a na-emepụta sebaceous glands site na mmanụ anụ ahụ. Ogo nke pore nwere ike ịdị ka ibu mgbe; 1) ego nke sebum n'elu akpụkpọ ahụ nzuzo site na sebaceous glands jikọtara na ntutu follicle na-abawanye 2) sebum na adịghị ọcha na-ekpokọta n'ime pore, ma ọ bụ 3) pore mgbidi na-aghọ sagged na gbatịa site mbelata nke elasticity n'ihi akpụkpọ ịka nká.
Ụda anụ ahụ
Agba akpụkpọ ahụ mmadụ dịgasị iche iche site na aja aja na-acha aja aja ruo nchara dị mfe nwere ike igosipụta ụda akpụkpọ ahụ yana nha Fitzpatrick. Ihe dị mkpa nke agba akpụkpọ ahụ bụ melanin pigmenti. A na-emepụta Melanin na sel ndị a na-akpọ melanocytes, yana akpụkpọ ahụ, ọ bụkwa isi ihe na-achọpụta ụcha akpụkpọ ahụ. Ọzọkwa, akpụkpọ ahụ gbara ọchịchịrị na-enwekarị sel ndị na-emepụta melanin nke na-emepụta ọtụtụ melanosomes, buru ibu ma dị njọ, ma e jiri ya tụnyere akpụkpọ anụ.
Akụkọ a gosipụtara na nsonaazụ onyonyo achọpụtara:
Nke a bụ ihe na-echegbu ọtụtụ ndị na-eche banyere nlekọta anụ ahụ. Otu ugboro n'ọnwa bụ ihe kacha mma. Agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị na-eche maka ahụike akpụkpọ ahụ gị ma chọọ ịma ma pr ...
MEICET bụ onye na-eweta teknụzụ ịma mma nwere ọgụgụ isi nke raara onwe ya nye R&D ịma mma yana nyiwe ọrụ ịntanetị nke ihe. Akara ya "MEICET" na-elekwasị anya na customizati...
Onye ọ bụla chọrọ ka akpụkpọ ahụ dị mma ka ọ na-aga maka usoro kachasị ewu ewu iji mee ka akpụkpọ ahụ dị mma. Agbanyeghị, onye ọ bụla nwere ụdị akpụkpọ ahụ dị iche na ụzọ kachasị mma isi chọpụta ụdị akpụkpọ ahụ gị bụ ịnweta pro ...